Obama Safarkiisii u dambeeyey ee dibadda - BBC News Somali
Obama Safarkiisii u dambeeyey ee dibadda
Image caption Madaxweyne Obama
Madaxweyne Barak Obama ayaa goor dhaweyd gaaray wadanka Gariiga taasi oo billow u ah socdaalkiisii ugu dambeeyey ee dibadda uu ku tago isagoo ah Madaxweyne, waxaa sidoo kale uu booqan doonaa wadanka Jarmalka.
Obama ayaa sheegay in uu mar kale u xaqiijin doonno hogaamiyayaasha Yurub in Doland Trump [Madaxweynaha la doortay] uu adkayn doonno xiriirka istaraatijaydeed ee muhiimka ah ee Mareykanka oo ay ka mid yihiin NATO.
Mr Trump ayaa shaki horay u galiyey qiimaha gaashaanbuurtaasi leedahay intii lagu guda jiray olallihiisa, Laakiin Mr Obama ayaa farta ku fiiqay in madaxweynaha la doortay uu muujiyey doonista sii socoshada balankaas, isla markaana aannay jiri doonnin wax dafiicin kara go'aankaasi.
Isagoo hadlayay intii aannu dhoofin ayuu Mr Obama wuxuu sheegay in ay la tahay in Mr Trump uu yahay nin waaqici ah halkii uu ku ahaan lahaa nin fikir aaminsan.
(Wuxuu qeexay [Mr Trump] in uu sii wadi doonno dimuqraadiyada Mareykanka, isagoo xusay in uu saaran yahay Markab wayn balse aannu saarnayn doonni xawaare badan).